के अब ओली सङ्कटकाल लगाउलान् ? « Rara Pati
के अब ओली सङ्कटकाल लगाउलान् ?
११ फागुन, काठमाडौँ । सर्वाेच्च अदालतले प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओलीको संसद विघटन गर्ने असंवैधानिक निर्णयपश्चात् बजारमा संकटकालको हल्ला चलेको छ । विशेषतः के.पी. ओलि पक्षका साइवरेहरूबाट यस्तो हल्ला गरिएको छ । सर्वाेच्व अदालतले गरेको यो ऐतिहासिक निर्णयलाई सिरोपर गरी आफूले चालेको कदमको समिक्षा गरेमा मात्र ओलीले आफ्नो राजनीति बचाउन सक्नेछन् । तर आफु प्रधानमन्त्री रहन जेसुकै हर्कत पनि गर्न पछि नहट्ने ओली के साँच्चै सङ्कटकालको अस्त्र चलाउलान् ? केपी शर्मा ओलीसँग अँझै पछाडि फर्किने साँघुरो बाटो बाँकी छ । उनले यो घटनाप्रति प्रायश्चित गरी गल्ती भएको विन्दुबाट यसलाई सच्याए भने उनको राजनीति अँझै बच्न सक्दछ ।
उनले नैतिकताका आधारमा राजिनामा दिई वैकल्पिक मार्ग प्रशस्त गर्नु पर्दछ । उनी अझै सक्छन् भने पार्टी विभाजनलाई बचाउन म जुनसुकै त्याग गर्न तयार रहेको कुरा पार्टी कार्यकर्तालाई प्रस्ट भन्नु पर्दछ । तर संकटकाल लगाएर सबलाई ठिक लगाउँछु भन्ने अझै कहि कतै दम्भ र भ्रम छ भने भीरमा हाम फाल्ने गोरुलाई राम राम भन्नु बाहेक उनका समर्थकका लागि पनि अरु थोक बाँकी रहने छैन ।
नेपाली सेना व्यावसायिक सेना हो । यो अहिलेसम्म राजनीतिमा प्रत्यक्ष सङ्लग्न भएको छैन । अहिले सङ्कटकाल लगाउने कसैको मनसाय छ भने पनि नेपाली सेनाले अदालत र संविधानको रक्षा गर्दै यसो नगर्न प्रधानमन्त्रीलाई सल्लाह दिनेछ । नेपाली सेना प्रधानमन्त्रीको नौटङ्कीमा पक्कै समावेश हुने छैन । नेपाली सेना मूलतः देशभक्त छ । यो राजभक्त पनि थियो । जनतामाथि दमन गर्नु हुँदैन भन्ने नेपाली सेनाको चेतले नै जनता सडकमा उठिसकेपछि राजा ज्ञानेन्द्रलाई पनि पछि हट्न नै उपयुक्त भएको सल्लाह दिएको थियो । यही परिवेशमा राजा ज्ञानेन्द्र जनताको नासो जनतालाई फिर्ता गर्न बाध्य भएका थिए । केपी शर्मा ओलीले इतिहासबाट शिक्षा लिई आफ्ना सिमितताहरू राम्ररी बुझ्नु पर्दछ ।
केपी शर्मा ओलीका पछाडि लागेर उचाल्ने र गलत सल्लाह दिनेहरू यदि साँच्चीकै हावी नै छन् भने सायद उनलाई फेरी अर्काे पटक उचाल्न लगाइनेछ । उनको अहंकार र दम्भ अझै पन्पनाएको छ भने उनी अझ एक पटक अहङ्कारको पिङ खेल्नेछन् । प्रजातन्त्र, संविधान र जनताको त्याग र बलिदानसँग फेरी एक पटक जिस्किने छन् । उनको आफ्नै मतिले या ती गुलियो सल्लाह दिनेहरुले नै केपी ओलीको बचेखुचेको इतिहास पनि राम्ररी रसातलमा पु¥याई दिनेछन् । असंवैधानिक तवरले संसद विघटन गरेर आफ्नो ७० औं जन्म दिवसमा सर्वाेच्व अदालतको उपहार पाएका अल्पमतका प्रधानमन्त्री फेरी सङ्कटकाल लगाउने दुस्साहस गरे भने जनताकै हातबाट अँझै ठुलो उपहार उनलाई दिनेछन् ।